LOVE ISLAND ၏မိဖုရားမြွေဖြစ်သည့် MEGAN ကသူမသည် WES နှင့် LAURA တို့အား VILLA မဝင်မီကပြောကြားခဲ့သည် - သတင်း
အမှန်တကယ် muggy Megan ကားအဘယ်သူနည်း သငျသညျ Love Island ရဲ့မိဖုရားမြွေအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်သမျှ
Megan သည် villa ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးကတည်းကဘယ်တော့မှနောက်ကွယ်မှဒရာမာဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါ။ Eyal vs Alex ပြိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုလုံးရှိခဲ့ပြီးယခုသူမသည် Laura မှ Wes ကိုခိုးယူရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးကြည့်ရှုသူများနှင့်အခြားကျွန်းသူကျွန်းသားများလုံးဝတုန်ခါနေသည်။
ရုံ ygan သမျှသော megan ရဲ့သတိပေးချင်တယ် #loveisland ဇီဝက pic.twitter.com/om4OFhwGEz
- မိခါ (@_michachu) ဇွန်လ 26, 2018
အာဒံမှလက်ရှိဘုရင်၏မြွေအဖြစ်ယူပြီး Megan နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်ဘာသိထားသေးသနည်း။ ကျွန်းသူကျွန်းသားမဖြစ်ခင်သူဘာလုပ်ခဲ့သနည်း။ ဝီလာနှင့်လော်ရာကိုမချေဖျက်နိုင်ကြောင်းသူမမပြောခင်သူမအိမ်သို့မဝင်မီကသင်သိခဲ့ပါသလား။ Megan Barton Hanson အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
Megan သည် ၂၄ နှစ်ဖြစ်ပြီး Essex မှလာသည်
Megan သည်မိမိကိုယ်ကို 'Essex မိန်းကလေးမဟုတ်' ဟုဖော်ပြသည်။ သူမအနေဖြင့် villa အတွင်းရှိဘဝကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နေစဉ်တွင်သူမအနေဖြင့်ယုံကြည်မှုရှိပုံရသော်လည်းသူ၏မိတ်ဆွေများကသူမအလွန်နက်ရှိုင်းစွာရှက်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
@ohrangutang x @cristinapilo x @ sixty6mag
မျှဝေသည် Megan Barton Hanson 2:31 pm တွင် PDT မှာမေလ 16, 2018 ရက်တွင် (@meganbartonhanson_)
Villa သို့မ ၀ င်ခင် Wes နှင့် Laura တို့ကိုသူမခွဲခွာနိုင်ဟုသူမကပြောခဲ့သည်။
Villan မ ၀ င်ခင်သူမ၏တရားဝင်ဇီဝဖြစ်စဉ်တွင် Megan က“ Laura နဲ့ Wes ကိုမခွဲခွာချင်ဘူး၊ ထွက်လှည့်ပုံကိုရယ်စရာ။
Megan ကသူမမှာအပြင်မှာသူငယ်ချင်းမရှိဘူး၊ ကြည့်ရတာ Wes နဲ့သူမအပြုအမူကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမကပြောနေသည်
သူမ၏အိမ်အပြင်ဘက်တွင်မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းများမရှိကြောင်းပြသမှုတွင်ပါ ၀ င်ပြီးနောက်ကြည့်ရှုသူများကသူသည်လော်ရာနှင့်ပျော်ရွှင်စွာတွဲဖက်ထားသော်လည်း Wes ကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့သည်ကိုကြည့်ခြင်းကအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
မိန်းကလေး squirt ဖို့ဘယ်လို
ငါ Megan လုံးဝမုန်း၏။ Wes နှင့်လော်ရာငြင်းခုံကြသောအခါထိုအရပ်၌ထိုင် smirking ။ ပြီးတော့ Megan 'ကျွန်မမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်တစ်ခါမှမရှိခဲ့ဖူးဘူး' လို့ပြောနေတာဘာကြောင့်လဲလို့ကျွန်မတွေးမိသည်။
- မေီ (@amyarmitage_) ဇွန်လ 27, 2018
ငါမဆိုမိန်းကလေးရှိခဲ့ဖူးဘူး။ ကောင်းပြီ Megan ငါသူတို့ကိုသင်အဘို့အလေးစားမှုမရှိခြင်းနှင့်အတူအံ့သြစရာ fuck ဆိုတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ မင်းကလူ ၂ ယောက်ကိုငါချိုးဖဲ့လိုက်တာသိလိုက်တာနဲ့မင်းကအဲဒီမှာထိုင်နေတဲ့ပုံကိုငါ့သွေးကပြစေသည်။
အဆိုပါ fuck ဆိုတဲ့ဘင်အတွက်ရယူ ?? #LoveIsland
- အမ်မလီ? (@_Emlom_) ဇွန်လ 27, 2018
Megan တစ်ချိန်က Giggs ဂီတဗီဒီယိုတွင်ထင်ရှားခဲ့သည်
Megan သည် Giggs ၏ '' သူ၏ 2016 hit ဂီတဗီဒီယို '' Lock Doh 'တွင်ထင်ရှားခဲ့သည်။ Grime တေးဂီတတွင် YouTube တွင်ကြည့်ရှုသူပေါင်း ၁၉ သန်းကျော်ရှိပြီးမီဂန်သည်သူသောက်နေစဉ်သောက်သုံးနေစဉ်ကင်မရာကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကြည့်ရှုနေသည်။ ကျွန်းသားမှအလွန်တိုတောင်းသောအသွင်အပြင်ကိုကြည့်ရှုရန်ဗီဒီယိုသို့ ၄၃ စက္ကန့်ကိုကျော်သွားပါ။
Megan's Instagram ၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုတူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့သည် သူမကိုယ်သူမအပေါ်သီးနှံလောင်းချခြင်းနှင့် Tesco ရှိအတန်းမှာလှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်းကိုပြသခဲ့သည် ။ 'ရိုင်းစိုင်းသောကလေး' ဟူသောဗီဒီယိုအပိုင်းအစကိုတွစ်တာတွင်သူမ၏လုပ်ရပ်များအတွက်ဝေဖန်ခံခဲ့ရသည်။ ဆင်းရဲသော Tesco လုပ်သားအချို့သည် 'gram' မှပုံတစ်ပုံကိုသင်လိုချင်သောကြောင့်ဤအရာအားလုံးကိုကောက်ယူရန်လိုသည်။ စုစုပေါင်း '
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် megan တစ် dickhead ပါပဲ #loveisland pic.twitter.com/UAZNN7ZtZg
- Cardi BTEC (@amelia_perrin) ဇွန်လ 11, 2018
လူများသည် Megan ကိုဝေဖန်သည့်အရာတစ်ခု - သူမ၏လက်မများ - ကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့သည်
အမှန်မှာ၊ တွစ်တာမှလူများသည် Megan ၏မှားယွင်းမှုကိုဖော်ထုတ်ရန်ပြပွဲမှဓာတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးတိုက်ခိုက်မှုလမ်းကြောင်းအဖြစ်သူမ၏လက်မပေါ်တွင်အခြေချခဲ့ကြသည်။
Megan သည်လက်ချောင်းတစ်ချောင်းအတွက်စစ်မှန်သောခြေချောင်းတစ်ခုရှိသည် ??? ပုံ2ကိုချဲ့ပါ https://t.co/mBRUtMsXYo
- Gino D'acampo (@Cheskadimascio) ဇွန်လ 22, 2018
သူမလက်များနေသော်လည်း Megan ၏အပြင်ဘက်တွင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောမော်ဒယ်လ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်သည်
သူမသည် Maxim မဂ္ဂဇင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးယခင်က Sixty6 မဂ္ဂဇင်း၏မျက်နှာဖုံးတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
သင့်ရဲ့ Boob ပုံကိုဘယ်လိုရိုက်ရမလဲ
ကလေး, Darling, အရုပ်မျက်နှာ, ပျားရည်?
မျှဝေသည် Megan Barton Hanson (@meganbartonhanson_) 5:09 am PDT တွင်Aprပြီ 29, 2018 တွင်
၎င်းသည်သူမအား Instagram နောက်လိုက် ၅၆၀၀၀ ကိုကူညီနိုင်ခဲ့ပြီး villa သို့ ၀ င်ရောက်ပြီးနောက်တွင် ၄၀၀ နီးပါးအထိမြင့်တက်ခဲ့သည်
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အမှန်တကယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာတွေ့ရန်မလွယ်ကူနိုင်သော်လည်း Love Island သို့သွားခြင်းသည်သေချာမှုတစ်ခုမှာ villa မှထွက်ခွာသွားပြီးနောက်လူမှုမီဒီယာ၏သြဇာတိုးပွားလာမှုကြောင့်ကမကထပြုထားသော Insta ပို့စ်များမှငွေများမလုံလောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မျှတသောသတိပေးချက်၊ အကယ်၍ သင်သည်စာကြည့်တိုက်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဖတ်နေလျှင်၊ သို့မဟုတ်သင်အမေသည်အခန်းတစ်ခန်းတည်း၌ရှိပြီးကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှလမ်းလျှောက်နိုင်သည်ဆိုလျှင်၊ သူမသည်သူမညစ်ပတ် creep ကြီးပြင်းလာရဲ့စဉ်းစားချင်ကြဘူး။
ငါ့ဆံပင်ရှည်ကိုလွမ်းတယ် ကလေးများသည် DIY အထူးများကိုကြိုးစားရန်ကြိုးစားပါသလား။
မျှဝေသည် Megan Barton Hanson 7:44 pm တွင် PDT မှာမေလ 18, 2018 ရက်တွင် (@meganbartonhanson_)
ကျွန်မဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုကိုရေနစ်သေဆုံးစေတဲ့အတွက်ငါသောက်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုတော့အပြစ်စီရင်ခံရတဲ့အရာတွေကရေကူးတတ်လာပြီ။ - Frida Kahlo?
မျှဝေသည် Megan Barton Hanson 7:06 pm တွင် PDT မှာဇွန်လ 1, 2018 ရက်တွင် (@meganbartonhanson_)
သူသည်ထင်ရှားသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားတစ် ဦး နှင့်ချိန်းတွေ့ခဲ့ဖူးပြီးအနုပညာရှင်များသည်သူမ၏ DM များသို့လျှောကျလျှက်ရှိသည်
မီဂန်သည်တစ်နှစ်အကြာတွင်တစ်ကိုယ်ရေဘဝဖြင့်ကစားခဲ့ဖူးသူဖြစ်သည်။ Megan သည်သူမအား Insta တွင်မကြာခဏဆိုသလို DMing လုပ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ဒါကောင်းပါတယ်။
bomboclat jamaican အတွက်ဘာကိုဆိုလိုသလဲ
ယောက်ျားတွေဆီကအာရုံစူးစိုက်မှုအများကြီးရခဲ့တယ်လို့ ၀ န်ခံပေမဲ့ Megan ကများသောအားဖြင့်တော့မှားယွင်းတဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာဖို့ villa ကိုလာခဲ့တယ်
မျှဝေသည် Megan Barton Hanson 9:14 pm တွင် PDT မှာ (@meganbartonhanson_) မေလ 25, 2018 ရက်တွင်
Megan သည် ၀ ိညာဉ်ရေးရာပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်း Eyal ၏ BS နှင့် ပတ်သက်၍ သည်းမခံနိုင်လောက်အောင်ပင်သန့်ရှင်းမှုမရှိပါ
ယောဂ၏ကြီးမားသောပရိတ်သတ်ဖြစ်သည့် Megan သည်မိမိကိုယ်ကိုဝိညာဉ်ရေးသူဟုထင်မြင်သည်။ Doan Bits Society အဖွဲ့ ၀ င် Wes နှင့်အတူ ၀ င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက်သူမသည်သူမ၏ဝိညာဏသင်္ကေတများကိုငွေသားထုတ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီက Megan အား Eyal သို့ဆွဲဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
အမေသည်အစားအစာ၊ prada အိတ်နှင့်ဖနောင့်ပိုက်ဆံလိုအပ်သည်။ @partylikejzl @ sixty6mag @cristinapilo
မျှဝေသည် Megan Barton Hanson 5:06 pm တွင် PDT မှာမေလ 9, 2018 ရက်တွင် (@meganbartonhanson_)
• Love Island Australia နှင့် Love Island UK တို့သည်ပေါင်းစည်းရန်သီအိုရီတစ်ခုရှိသည်
• Love Island မှ Charlie ၏ဤမသန့်ရှင်းသောရုပ်ပုံများကသင့်အားထာဝရအပြစ်ကျူးလွန်မိပြီဟုခံစားရစေလိမ့်မည်
•ကျွန်ုပ်တို့သည် Love ကျွန်းကိုယောက်ျားကြည့်ရှုသူများဖြစ်ပြီးအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်းမှငြင်းဆန်ခဲ့သည်